Inona no ho hita any Los Angeles | Vaovao momba ny dia
Maria | | America, Etazonia
I Los Angeles dia iray amin'ireo tanàna heverinao fa efa fantatrao tamin'ny fiainanao manontolo noho ny sinema Hollywood. Hitanao tamina sarimihetsika sy andian-tantara tsy tambo isaina izay mety nanampy anao hazava kokoa momba ireo toerana tianao hotsidihina amin'ny dianao manaraka any Etazonia. Raha tsy izany ny zava-misy dia atolotray ireo zorony ilaina mba hahalalana izay ho hita any Los Angeles.
1 Sary manoloana ny famantarana Hollywood
2 Mandehana ny dian'ny laza
4 Filentehan'ny masoandro ao amin'ny Observatory Griffith
5 Ary mandeha ao amin'ny Griffith Park
6 Piera Santa Monica
10 Tsenan'ny tantsaha any Los Angeles
Sary manoloana ny famantarana Hollywood
Tianao ho fantatrao ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery sosialy hoe aiza no andanianao ny fialan-tsasatrao, marina? Ka tsy misy tsara noho ny sary eo alohan'ilay famantarana malaza any Hollywood izay hitantsika imbetsaka teo amin'ny efijery lehibe. Any amin'ny faritra onenan'i Hollywood Hills no misy azy, ary misy olo-malaza maro monina. Azonao atao angamba ny manararaotra mahita ny iray amin'ireo sampy ataonao akaiky.
Mandehana ny dian'ny laza
Sary | Ny firenena
Drafitra tena ilaina mandritra ny dia mankany Los Angeles ny dia amin'ny Hollywood Boulevard, iray amin'ireo làlana lehibe eto an-tanàna. Ny ampahany fantatra amin'ny anarana hoe Walk of Fame dia eo anelanelan'ny Gower Street sy ny La Brea Avenue ary noforonina tamin'ny taona 50 mba hanavaozana ny fisehoan'ity faritra Los Angeles ity.
Nanomboka tamin'izay dia nanjary iray amin'ireo toerana notsidihan'ny mpizahatany sy ny mpizaha tany mitady ny kintan'ny artista tiany indrindra izy io. Tsy mora izany satria mandeha an-tongotra mihoatra ny roa kilometatra misy kintana 2.500 eo ho eo izy io. Raha ny marina, ny lisitry ny kintana dia mitombo indroa isam-bolana, noho izany dia mila miaritra faharetana ianao mahita ireo tianao halaina sary.
Ny fitsidihana ny Walk of Fame ho an'ny kintana dia tsy zavatra tokana azonao atao ao amin'ny Hollywood Boulevard. tOhatra, eto ianao dia afaka mitsidika ny Theatre sinoa miaraka amin'ny endriny manaitra amin'ny endrika pagoda sy dragona. Eo akaiky eo ny Teatra Dolby, toerana anaovana ny lanonana Oscars isan-taona. Mety ho liana ianao amin'ny fandraisana fitsangatsanganana misy torolàlana hijerena ny teatra ary hankafizanao sary vongana akaiky.
Taorian'ny lohahevitra sinema, any Los Angeles dia ny valan-javaboary Universal Studios Hollywood, izay manana manintona betsaka natokana ho an'ny tontolon'ny sinema sy fitsangatsanganana an-tsehatra tena izy ampiasaina amin'ny sarimihetsika.
Etsy ankilany, raha mahaliana anao ny tontolon'ny Disney dia tokony ho fantatrao fa any Los Angeles dia azonao atao ny mitsidika ny valan-javaboary voalohany an'ny ozinina Mickey Mouse. Nanokatra ny varavarany tamin'ny 1995 izy io ary afaka nirehareha ho izy irery ihany no notantanin'i Walt Disney. Ity tanàna ity koa dia misy ny Disney California Adventure, valan-javaboary miorina amin'ny faritra samihafa amin'ny fanjakana California.
Filentehan'ny masoandro ao amin'ny Observatory Griffith
Iray amin'ireo masoandro mody tsara indrindra any California ao amin'ny Griffith Observatory. Amin'ny fomba fijeriny dia azonao atao ny mahita an'i Los Angeles maimaimpoana, raha afaka manararaotra mandetika ny astronomia ianao.
Sary | Ny hevitra
Ary mandeha ao amin'ny Griffith Park
Azonao atao ihany koa ny mampiasa ora vitsivitsy amin'ny dianao mankany Los Angeles handehandeha manaraka ny lalan'ny Griffith Park, izay misy velaran-tany mihoatra ny 1.700 hektara ary tranon'ny Museum of the American West, taranja golf sasany, carousel, ary zaridaina iray. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny filazana fa Griffith Park dia sehatry ny sarimihetsika toy ny "Back to the Future" na "Who Framed Roger Rabbit?".
Piera Santa Monica
Sary | Tsidiho ny California
Olona an-jatony no miampita isan'andro ao amin'ny Santa Monica Pier mba hankafy ny fahitana ny morontsiraka, mandany hariva any amin'ny Pacific Park (ilay voly fialamboly malaza eo amin'ny seranan-tsambo) na misotro zava-pisotro iray ao amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana ao amin'ilay faritra.
Eo amoron-dranomasin'i Santa Monica no misy ny trano rantsan-kazo malaza amin'ny andiany "Baywatch" ... Tsy te haka sary misy akanjo miloko mena ve ianao ary mody iray amin'ireo mpiambina mpamonjy voina malaza tamin'ny taona 90? Ho gaga ny namanao!
Raha miresaka momba ny torapasika, Venice Beach dia iray amin'ireo toerana tsy maintsy zahana raha hitsidika ny dia any Los Angeles. Skater, skater, fianakaviana mivory eto ... Any akaikin'ny Beach Venice, misy ireo lakandranon'i Venise, aingam-panahy avy amin'ny lakandranon'i Venise, faritra iray tena tsara handehandehanana eny amin'ireo arabe kely misy trano sy lakandrano.
Sary | Fizahan-tany USA
Iray amin'ireo tranombakoka manan-danja indrindra any Los Angeles ny Getty Center, noforonin'ny mpandraharaha J. Paul Getty mba hampisehoana ny sangan'asa ampiasain'ny mpanakanto toa an'i Titian, Van Gogh ary Rembrandt. Maimaimpoana ny fidirana ary misy fitsangatsanganana an-tsehatra amin'ny tranombakoka hahita ny fanangonana azy sy ny zaridaina ary ny rafitr'ilay trano. Ankoatr'izay, avy amin'ny Getty Center dia manana fomba fijery tsara momba an'i Los Angeles ianao.
Raha manam-potoana kely ianao aorian'ny fitsidihanao ny Getty Center, dia azonao atao ny mitsidika ny Getty Villa, villa iray manana endrika romana miankina amin'ny tranombakoka ary manana sary kanto maro ao amin'ny efitranony.
Iray amin'ireo toerana malaza fitsidihana an'i Los Angeles ihany koa ny manodidina an'i Beverly Hills, tranon'ny sasany amin'ireo trano be ritra indrindra any California ary onenan'ireo olo-malaza. Raha ny marina dia misy fitsangatsanganana misy torolàlana hahafantarana ireo te hahafanta-javatra rehetra momba ny Beverlly Hills.
Rehefa avy naka ny sary mahazatra miaraka amin'ny famantarana izay manondro ny fahatongavan'ny manodidina, nitodi-doha nankany amin'ny Rodeo Drive izahay, faritra iray feno fivarotana lehibe izay manana ny lazany manokana ihany koa ho an'ireo mpamorona lamaody antsoina hoe Rodeo Drive Walk of Style. Azonao atao ny mamita ny fitsidihana amin'ny alàlan'ny fahalalana an'i Two Rodeo Drive (ivon-toeram-pivarotana kely fanao eropeana) sy ny hotely Beverly Wilshire, izay nalaina sary ny ampahan'ny horonantsary "Pretty Woman".
Tsenan'ny tantsaha any Los Angeles
Ny fitsangatsanganana be loatra dia miteraka faniriana hanina, sa tsy izany? Aza adino ny mijanona eo amin'ny tsenan'ny tantsaha Los Angeles, toerana tokana feno fivarotana sy trano fisakafoanana azo hanina. Misokatra isan'andro izy io, na dia faran'ny herinandro aza ny faran'ny herinandro. Fantatra ihany koa izy noho ny tilikambon'ny famantaranandrony malaza nanomboka tamin'ny taona 40.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Etazonia » Inona no ho hita any Los Angeles
Ahoana ny fanavaozana ny pasipaoro